raga geedka jilcan oo gabdhaha xanta xanteeya kaliya - Hablaha Media Network
raga geedka jilcan oo gabdhaha xanta xanteeya kaliya
HMN:- Raga waa ku kala duwan yihiin gobaha laga dareemo macaanka ciyaarta sariirta balse waxaa jira goobo ay raga inta badan isaga mid yihiin oo aadna ugu dhaw una shabaha goobaha haweenka ka kacsadaan.
Bishimaha: waa goobaha ugu daran ee labada lamaane ka helaan macaanka , waxaan la dhihi karaa waxa ay mas’uul ka tahay kalgaceylka labada lamaane.
Dagaha: waxaa ka buuxa xidido ka yeelaya dhagaha kuwa dareen badan , waxa ay dadkii hore ee reer Shine u arkaan in dhagta ay u dhiganto dhamaan xubnaha jirka .
Waxa ay haweeneyda ay ku kicin kartaa dareenka dhagta iyada oo afka hore ee caarbkeeda ku salaaxda sidoo kalana ku qabata dhunkasho jilicsan kuna sii daliigeysa faraha, sidoo kale dhagta gadaasheed iyana waa ka ooyaan ee gabar yaheey haka xishoon oo erayo macaan ku dheh kuwaas oo hawada sii gilinaya.
Xabadka: waa goobaha ay ragga jecel yihiin in laga kiciyo, sidoo kale ibnta naasaha waa ay la ooyaan hadii aad carabka ugu salaaxdo..
Malabyaroowga: siiba afka hore ee malabyarowga oo aad ka salaaxdo ayaa ugu filan in sida libaaxa oo kale u qayliyo , sidoo kale xaninayaha iyo sharqaanka hoose ee xaniyaha ka dambeeya oo aad salaaxdo ayaa ku filan in kacsi waaw uu la dhaho.